हाम्रो देश, साथै पूर्व सोभियत संघ को नागरिक को बासिन्दाहरू लागि, पाङ्ग्रा reinvent गर्छन। यो किन्न महंगा छन् कि उपकरणहरू लागू हुन्छ, तर यसलाई आफ्नो हातमा सिर्जना गर्न एकदम सम्भव छ। जो माथि डिजाइनर दर्जनौँ रोजगार उपकरण, तपाईं आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो ज्ञान, इच्छा र कल्पना को एक न्यूनतम आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, एक घर बनाएको एसयूवी घरेलू कार को नियमित मोडेल को बनाइने गर्न एकदम सम्भव छ।
को आधारमा आत्म-गरे UAZ बन्द-सडक वाहन
आफ्नो हातले ब्रान्ड कार को पहिचान गर्न ल्याउन त गाह्रो छैन। प्रमुख परिवर्तन को लागि आवश्यक:
चढाना लागि grooved edging संग एल्यूमीनियम पानाहरू सेट गर्नुहोस्।
धातु र रबर अस्तर।
सिंथेटिक्स बनेको मैट।
उपकरण (Wrenches, Screwdrivers, सहयोगी उपकरणहरू)।
विशेषताहरु सबै manipulations को उचित आचरण संग घर एसयूवी महंगा समकक्षों भन्दा झन् खराब छैन आउँछन्।
बाहिरी छाला को बलियो बनाउँछ र कार फ्रेम हेर्न सुरु गर्न। यसलाई उच्च लोड लागि डिजाइन इस्पात ट्यूब प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं एक एसयूवी र दलदल buggies बस छैन सिर्जना गर्ने योजना, विशेष गरी यदि चिस्यान देखि इन्सुलेशन प्रदान विचार गर्नुपर्छ।
यो असम्भव वेल्डिंग पाइप हो भने, तपाईं मूल मामला oise प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं यो इच्छित कन्फिगरेसन दिने, बदलन। अनिवार्य सुदृढ माग पक्ष रेल, माथि र तल थाली।
एसयूवी UAZ को घर पुरानो अस्तर हटाउने पछि उत्पादन। साथ शरीर वृद्धि संग मौसम र जंग प्रकोप गर्न प्रतिरोधी छ जो एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु, को नयाँ डिजाइन माउन्ट। छनौट पानाहरू भौतिक जसको मोटाइ छैन भन्दा कम पन्ध्र मिलीमीटर छ चयन गर्नुपर्छ। नयाँ SHEATHING विशेष टाउको फ्रेम गर्न निश्चित जुन स्क्रू, संग fastened। कुनै पनि अनियमितताहरु बाहिर चिकना र backlash हटाउन, रबर पैड प्रयोग गर्नुहोस्।
नयाँ भवन को गलत स्थापना यांत्रिक डिजाइन र प्राकृतिक प्रभाव गर्न पूर्ण कमजोर प्राप्त गर्न सक्छन्। तसर्थ, cladding को स्थापना बाहिर ध्यान र ध्यानपूर्वक, सबै चरणमा जाँच, यो भाग सबैभन्दा fastidious छ देखि आफ्नो हात संग जीप सिर्जना गर्दा UAZ आधारमा लगे गर्नुपर्छ।
एक घर बनाएको एसयूवी गरेर, तपाईं पुल को विधानसभा मा उन्नतोदरता ध्यान पर्छ, तपाईं पहिलो तल तत्व बेयरिंग वेल्डेड हुनुपर्छ। त्यसपछि, तिनीहरूले bolting द्वारा फ्रेम मा माउन्ट छन्। पाङ्ग्रा वा ट्रयाक को चयन प्रकार को सञ्चालन विशेषताहरु खातामा लिएर।
टोक को रियर धुरा गर्ने शक्ति एकाइ देखि PTO शाफ्ट माध्यम ले प्रेषित छ। यस्तो विधानसभा कि यो कायम र मर्मत गर्न सजिलो छ मा लाभप्रद छ। ल्याण्डिङ स्लट प्रत्येक अन्य संग एकै समयमा पर्नु भनेर निश्चित गर्न पूर्व-आवश्यकता। अन्यथा यो recessed प्वालहरू को आवश्यक नम्बर उत्पादन गर्न आवश्यक छ।
कार को अन्त मा एक अद्यावधिक परीक्षण धेरै पटक आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूले जाँच र कुनै पनि समस्या समाधान गर्न, एक घर एसयूवी मा सवारी आवश्यक समस्या क्षेत्रको खोज निम्न सुरक्षित थियो। वस्तुतः सम्पूर्ण आधुनिकीकरण प्रक्रिया एकल योजना द्वारा गरिन्छ। मूल मात्र पवरट्रेन र शरीर छ।
"ओका" बाट घर एसयूवी
दुर्गम सडक संग क्षेत्रहरु लागि यो पनि एउटा संकुचित कार देखि, एक दलदल buggies बनाउन एकदम सम्भव छ। प्रक्रिया कार भागहरु भङ्ग, खत्म स्क्रापहरू पाइप र धातु पानाहरू देखि लिएर, उपलब्ध विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कारीगरों बीचमा ठूलो मांग मा आधार वा कम दबाव संग पाङ्ग्रेमा सार्वभौमिक वायवीय उपकरण उठाउँछ। आर्थिक र व्यावहारिकता को मामला मा एक धेरै लागत-प्रभावकारी समाधान - "ओका" को आधारमा एक जीप सिर्जना।
आत्म-गरे, माथि फोटो प्रतिनिधित्व छ जो, "ओका" बाट निम्न अनुक्रम नियालेर गर्न सकिन्छ-सडक बन्द:
लागि नयाँ वाहन आधार चयन गर्नुहोस्। यो केवल मोटरसाइकल, "आईएल" वा "यूराल" को फ्रेम हुन सक्छ।
को रियर धुरा र निलम्बन गर्न। छेउमा सदस्यहरूको भागहरु जडान यो चरण, को Strut, मा।
फिक्सिंग को माध्यम द्वारा स्टीयरिंग रैक र स्लिभ एकल निलम्बन एकाइ सिर्जना गर्नुहोस्।
को पाङ्ग्रा, तपाईँ संक्रमण हब को माध्यम द्वारा fastened जुन ट्रक, मा क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
फ्रेम र निलम्बन सेट नयाँ इन्जिन, प्रसारण र ब्रेक माउन्ट पछि।
ध्यान के मा?
माथि हामी एक घर एसयूवी कसरी बनाउने देख्यो छन्? सबै लाभ भए तापनि यो प्रविधी केहि कमियां छ। विशेष मा, धेरै प्रयासमा उद्धार कम दबाव कोठामा। तिनीहरूले एक सेवा आवश्यक छैन तापनि सेवामा तत्व कम maneuverable छन्।
यो एकदम मानक पाङ्ग्रा भन्दा ठूलो भएको आयाम रूपमा माटो उडान विरुद्ध सुरक्षा तिनीहरूलाई सुसज्जित गर्न गाह्रो पनि छ।
अभ्यास शो, घर एटीवी मा pneumatics को कमला भन्दा कम व्यावहारिक रूपमा। को "ओका" वा UAZ आधारित घर बनाएको एसयूवी बाँकी खातामा यो संचालन र जमिनको कारक को विशेषताहरु आधारमा संरचना समायोजन गर्न सम्भव छ कि पक्ष लिएर, प्रभावकारी र प्रयोग गर्न सजिलो खर्च।
सबै यस्ता उपकरण उपयुक्त ग्रामीण सडक मा बासिन्दा र चरम पर्यटन प्रेमीहरूलाई को पहिलो।
एसयूवी "Tiksi 250": मालिकको समीक्षा, प्रौद्योगिकी विशेषताहरु
स्वतः LuAZ द्वारा भूमि, समुद्र र हावा अवतरण सार्न 967 उत्कृष्ट प्रविधी
Snowmobile "पोलरिस": प्राविधिक विनिर्देशों र समीक्षा
VAZ-21218 "बाधा": विनिर्देशों, मालिकको समीक्षा, एउटा परीक्षण ड्राइभमा
चकलेट ट्री: फोटो र विवरण। चकलेट रूख कहाँ बढ्छ?
सेन्ट पीटर्सबर्गमा नयाँ आवासीय परिसर - "लाडोगा पार्क"।
शुरुआती लागि मोती संग कढाई लागि योजनाहरु
निर्देशन कसरी "शब्द" मा फन्ट स्थापना गर्न
कसरी सौन्दर्य र जीवन मा राम्रो गर्छ
सूचना प्रणाली BARS
विश्वव्यापी सफलता हासिल गर्ने, ट्रस्टवी शो को एकल कलाकार अन्नाली अडोकोकिमोभ कसरी भयो?
"Hlormisept": प्रयोग, संरचना, सावधानीहरु लागि निर्देशन